कोरोनाबाट विश्वभर ६४ हजारको मृत्यु, १२ लाख संक्रमित(कुन देशको अवस्था कस्तो?) – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/कोरोनाबाट विश्वभर ६४ हजारको मृत्यु, १२ लाख संक्रमित(कुन देशको अवस्था कस्तो?)
कोरोना भाइरसका कारण अमेरिकामा एकै दिन एक हजार ४८ जनाको ज्यान गएको छ।अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या आठ हजार चार सय ५२ पुगेको छ। त्यस्रतै त्यहाँ ३ लाख ८ हजार ५ सय ३३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ।आइतबार बिहानसम्मको तथ्यांक अनुसार,अमेरिकापछि स्पेनमा संक्रमणदर उच्च देखिएको छ।
स्पेनमा १ लाख २६ हजार १ सय ६८ मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। इटालीमा १ लाख २४ हजार ६ सय ३२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ६४ हजार ६ सय ६ पुगेको छ। १२ लाख भन्दा बढी मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्।त्यस्तै, २ लाख ४६ हजार १ सय ८ जना उपचारपछि निको भएका छन्।
काठमाडौं । सारोन मोलेम । कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभरि फैलिएको छ। यो महामारीसँगै एउटा चाखलाग्दो तथ्य लुकेको छ। त्यो हो– संक्रमणबाट मृत्यु हुनेमा हरेक देशमा महिलाभन्दा पुरुष बढी छन्। यस्तो किनरु आनीबानीका आधारमा यस्तो भएको विश्लेषण गरिएको छ।यो विश्लेषण केही हदसम्म तर्कसंगत पनि छ। चुरोट बढी तान्ने, समयमै स्वास्थ सेवा लिन अनिच्छुक र तुलनात्मक रुपमा हात कम धुनेमा महिलाभन्दा पुरुष बढी भएकाले यस्तो तर्क गरिएको हो।
तर, यहाँ एउटा वैज्ञानिक तथ्यलाई बिर्सिएको छ। त्यो हो– जीवनको निरन्तर अस्तित्वको हिसाबले महिलाभन्दा पुरुष कमजोर लिंग हो। यो जीवनको कालखण्डमा एकपटक मात्र आउने महामारीका बेलाको प्रसंग मात्र होइन।लैंगिक हिसाबमा अन्तर्निहित जैविक फाइदा जीवनको हरेक चरणमा हुन्छ। उदाहरणका लागि पहिलो जन्मदिन मनाउने मौका केटालेभन्दा केटीले बढी पाउँछन्। एक सय वर्षभन्दा बढी उमेरका मानिसमा ८० प्रतिशत महिला छन् भने ११० वर्षभन्दा बढी उमेरकामा ९५ प्रतिशत महिला छन्।
काठमाडौंको महाबौ`द्ध मा संक्र`मित भेटिएपछि परी`क्षण गर्न सूचना